Hotely Iconic any Lome, Togo tsy manam-paharoa any Afrika atsimon'i Sahara
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Hotely Iconic any Lome, Togo tsy manam-paharoa any Afrika atsimon'i Sahara
Ny Hotely Hotel 2 Février Lomé Togo dia nisokatra ho trano fandraisam-bahiny misy sarivongana miorina ao afovoan-tanàna, amin'ny trano avo indrindra ao Togo, ary tsy manam-paharoa any Afrika Atsimon'i Sahara.
7 km miala ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Lomé-Tokoin, izay mampitohy an'i Togoto Afrikana tanàna, Eoropa sy ny sisa, ny Address Hotel 2 Février Lomé Togo dia hampiasaina amin'ny Address Hotels + Resorts an'ny Emaar Hospitality Group, izay handray ny fitantanana ny trano tsy ho ela.
Any akaikin'ny Monument of Independence, ny Address Hotel 2 Février Lomé Togo dia handray ireo vahiny taorinan'ny famerenany indray ny trano, naorina voalohany tamin'ny taona 1980. Hanana efitrano sy efitrano 256 ary efitrano fanompoana 64 misy serivisy sy trano fisakafoanana misy foto-kevitra ary toerana hafa misy ao. Togo no tanjona iraisam-pirenena fahenina ho an'ny adiresy izay misy tetik'asa hôtely ho avy any Arabia Saodita, Egypt, Turkey, Bahrainand The Maldives, ankoatry ny fisokafana vaovao any UAE.
Ashok Gupta, Tale Jeneralin'ny Kalyan Hospitality Development Togo SAU, ary mpanorina sy CEO an'ny Kalyan Group, izay tompon'ny hotely, dia nilaza hoe: 'Address Hotel 2 Février Lomé Togo dia fananana manana ny maha izy azy ao amin'ny portfolio ny fampiasam-bola amin'ny trano sy trano fandraisam-bahiny; natolotry ny Repoblikan'i Togo izay heverina ho 'Jewel of Africa Andrefana'. Hanampy ny hambom-pon'i Togo izany ary hanomezana toerana ho an'ny indostrian'ny hotely. '
Olivier Harnisch, tale jeneralin'ny Emaar Hospitality Group, dia nilaza hoe: 'Ny fifanarahana dia mariky ny fanitarana an'i Afrika Atsimon'i Sahara. Misaotra an'i Ashok Guptaand ny governemanta Togolese izahay noho ny fanohanan'izy ireo sy ny fahafahan'izy ireo nampiasa ny tetikasanay voalohany amin'ny hotely misy anay sy ny tetikasa onenanay any Togo, firenena mahavariana misy tombony azo amin'ny fitomboana. '
Teo aloha dia fantatra amin'ny anarana hoe Hôtel 2 Février, ny Hotely Hotel 2 Février Lomé Togo dia miorina amin'ny tilikambo iray 30 rihana, 102 metatra ny haavony, manome fomba fijery mahavariana. Miaraka amin'ny WiFi maimaim-poana, toerana misy ao amin'ny efitrano fivoriana, efitrano kongresy ary efitrano malalaky, spaoro mihaja, dobo filomanosana an-kalamanjana, serivisy mpiambina ary fivarotana antsinjarany, fialamboly mamelombelona ho an'ireo vahiny miasa sy miala voly.
Ny feon'ny fizahan-tany dia mety hahatonga an'i LGBTI any Istanbul hitranga anio